Qurxinta dhalooyinka - Fikradaha ku habboon gurigaaga | Bezzia
Sida loo qurxiyo dhalooyinka
Susana godoy | 14/10/2021 14:00 | Qalabka guriga
Waxaa jira agabyo badan oo ay tahay inaan guriga qurxino, laakiin shaki la'aan, the qurxinta dhalooyinka waa mid ka mid ah fikradaha waaweyn. Sababtoo ah iyaga ayaanu ku siin karnaa taabashada qaabka ama jaceylka ay qolal badan u baahan yihiin. Intaa waxaa sii dheer, annaga oo awood u leh inaan ku raaxaysanno dhammeystirro badan, waxaan had iyo jeer heli doonnaa waxaan raadineyno.
Markaa waxaan durba aragnaa in, mar walba, ay noqon doonaan jilayaasha ugu waaweyn ee gurigeenna. Dabcan maanta waan arki doonnaa sideen ugu qurxin karnaa dhalooyinka maxaa yeelay waxaa jira dhowr fikradood oo aan dhegta u dhigi karno. Ma rabtaa inaad ku raaxaysato dhammaantood? Markaa ha seegin wax kasta oo soo socda!
1 Sida loo qurxiyo dhalooyinka DIY
2 Isku dar weelal dhaadheer oo kala duwan
3 Weelasha ku yaal saxaarad
4 Ku qurxin khaanadaha dhalooyinka
5 Weelasha dhalada ah
Sida loo qurxiyo dhalooyinka DIY
Mid ka mid ah fursadaha waaweyn ee aan haysanno waa dhalooyinka aan ku rinjiyeyn karno oo aan dib u warshadaynno. Badanaa waxay ka samaysan yihiin dhalo, inkasta oo ay run tahay in agabyo kale la arki karo. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad iyaga siin karto nolol labaad iyo inay noqon doonaan kuwa ugu hal abuurka badan gurigaaga. Xaaladdan oo kale, waxaad haysan kartaa dhawr weel oo dhalooyin ah oo cabitaanno ahaan jiray, tusaale ahaan. Ka dib markaad si fiican u dhaqdo, waxaad ku rinjin kartaa midab isku mid ah laakiin ku kala duwan hadhyada, si aad u dhammaystirto hal abuur leh. In kasta oo ay jiraan dad badan oo doorta caddaan natiijo ka sii badan oo waafaqsan dhammaan noocyada qurxinta.
Isku dar weelal dhaadheer oo kala duwan
Mid kale oo ka mid ah sharadyada adag ee aan jecel nahay inaan ku aragno xagga qurxinta waa isku -dhafka dhererka kala duwan ee dhalooyinka. Sababtoo ah qaabkan waxaan ku raaxeysan doonnaa dhammaystir casri ah. Waa run inaadan u baahnayn wax aad u badan si aad awood ugu yeelatid inaad ku eegto labo ka mid ah ama ugu badnaan saddex isku meel, waxaad heli doontaa wax kugu filan. Dabcan, haddii aad leedahay aag ballaadhan oo saddex ay kuugu muuqdaan kuwo aad u yar, markaa had iyo jeer waad kordhin kartaa lammaane dheeraad ah, si halabuurku u sii ahaado mid aan joogto ahayn.
Weelasha ku yaal saxaarad
Meelaha dhexe waa mid kale oo ka mid ah fikradaha waaweyn ee aan jecel nahay. Waa run in lagu samayn karo ubax laakiin sidoo kale lagu samayn karaa dhalooyin. Sidaa darteed, kiiskan keligood ma yimaadaan laakiin waxay noqon doontaa saxaarad xiddig ku leh halabuurka. Waxaan jeclaan lahayn inaan ku raaxaysanno fikraddan oo kale oo aad ku ridi karto labada iridda guriga iyo miisaska qolka fadhiga ama qolka cuntada. Iskuday inaad saxarka u samaysid sida waafaqsan qaabka dhalooyinka ama midabkooda si aad u raacdo isla midabka kala duwan. Haddii aad rabto jawi dabiici ah oo dheeraad ah, u tag midabo khafiif ah kuna dhammee raffia ama alwaax.
Ku qurxin khaanadaha dhalooyinka
Aagga shelf oo aan ku haysanno dhammaan buugaagta, sawirrada iyo xusuusta guud ahaan, waxay sidoo kale u baahan yihiin ku -darid sida dhalooyinka. Laakiin kiiskan waxaan haynaa dhowr ikhtiyaar oo aan ka dooran karno. Dhinaca kale, waxaad dhigi kartaa labo ka mid ah qalabkan madhan oo u oggolow qaababkooda ama midabkooda inay siiyaan joogitaan dheeraad ah, ama ubax ku rid. Si loo dhammaystiro ka sii fudud oo ka yar buuqsan, haddii maktabaddu hore u ahayd, markaa waxaa habboon in dhalooyinkaasi madhan yihiin. Laakiin markaad rabto inaad ku darto taabasho jaceyl oo u dhexeeya buugaagta aad jeceshahay, ubax yar oo iyaga ku jira ayaa ku habboon. Maxaad doorbidaa?
Weelasha dhalada ah
Waxay had iyo jeer isu meeleeyaan mid ka mid ah aaladaha ugu quruxda badan. Sababtoo ah porcelain ayaa sidaas u gudbisa. Laakiin waa run in taas ka sokow aad sidoo kale kulmi karto moodooyinka maalmahan ugu kala duwanaa. Dabcan, annaga oo aan lumin iota dhadhankaas oo aan aad u raadinno. Waxa ku dhacaya maaddada noocan ahi waxay u baahan tahay sumcad badan, markaa kiiskan waxaa laga yaabaa inaan loo baahnayn inay noqoto laba ama saddex, laakiin mid aad u muuqda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qalabka guriga » Sida loo qurxiyo dhalooyinka
Talooyin lagu hagaajinayo timaha biraha sida pro
Warka suugaanta ee ku geeya waagii kale